ဒူဒူကြီး: "Operation of Servo-valve inahydraulic actuator"
"Operation of Servo-valve inahydraulic actuator"
hydraulic systems တွေကို open loop system နဲ့ closed loop system ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ open loop system ဆိုတာကတော့၊ hydraulic fluid ဟာ အသုံးပြုပြီး cycle ရဲ့ အဆုံးမှာ၊ unpressurized fluid return အဖြစ်၊ hydraulic tank သို့၊ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ့် system ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic pump ရဲ့ အဝင် inlet နဲ့ hydraulic motor ရဲ့ အထွက် return တို့ကြားမှာ directional valve တလုံး၊ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ return line ကိုတော့ hydraulic tank ဖြင့်၊ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
Fig. (A) - Open loop system and (B) - Closed loop system
closed loop system မှာတော့၊ hydraulic fluid ဟာ အသုံးပြုပြီး cycle ရဲ့အဆုံးမှာ၊ closed pressurized loop တခုအတွင်းရှိနေကာ၊ hydraulic tank သို့၊ return အနေနဲ့ ပြန်မလာတဲ့ system ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic pump ရဲ့ အဝင် inlet နဲ့ hydraulic motor ရဲ့ အထွက် return line တို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
electrical signal အသုံးပြုကာ၊ valve spool ရဲ့ position အား လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲရွှေ့လျှားစေနိုင်တဲ့ hydraulic valves တွေကို၊ 'servo-valve' လို့ခေါါကာ၊ 'flapper nozzle type' နဲ့ 'jet pipe type' ဆိုပြီး၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။closed loop control system တွေမှာ၊ servo-valve ကို command sensor, feedback sensor တွေ အပါအဝင် analog သို့မဟုတ် digital controllers တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ တိကျတဲ့ accurate position control အား ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
servo-valve ကို hydraulic actuator နဲ့ combination အဖြစ် တွဲဖက် အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ servo-actuator လို့ခေါါပါတယ်။ servo-valve ကို low power electrical signal ပေးသွင်းရုံဖြင့်၊ hydraulic actuator သို့မဟုတ် hydraulic motor အား၊ တိကျတဲ့ accurate position နဲ့ရွှေ့လျှားစေနိုင်ပါတယ်။ servo-valves တွေမှာ၊ torque motor, flapper nozzle သို့မဟုတ် jet pipe နဲ့ spools အစရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို၊ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
hydraulic actuator သို့မဟုတ် hydraulic motor ကို တိကျတဲ့ accurate position ဖြင့်ရွှေ့လျှားစေရန်၊ servo valve မှ ပထမအဆင့် 'Stage 1' နဲ့ ဒုတိယအဆင့် 'Stage 2' ဆိုပြီး၊ အဆင့် (၂) ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တခါတရံ တတိယအဆင့် 'Stage 3' ထည့်သွင်းထားတဲ့ servo valves တွေ ကိုလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ပထမ အဆင့် 'Stage 1' ဟာ hydraulic pressure amplification ဖြစ်ပြီး၊ flapper nozzle သို့မဟုတ် jet pipe နဲ့ spools တို့မှဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ low power electrical signal ကြောင့်၊ flapper nozzle သို့မဟုတ် jet pipe ရွှေ့လျှားပြီး၊ differential pressure '∆p' ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ '∆p' ကြောင့် spool ရွှေ့လျှားပြီး၊ spool မှ '∆p' ကို amplification အဖြစ်၊ pressure တိုးမြှင့်ကာ၊ hydraulic actuator သို့မဟုတ် hydraulic motor သို့ သက်ရောက်စေပါတယ်။
spool မှ hydraulic actuator သို့မဟုတ် hydraulic motor သို့ hydraulic pressure သက်ရောက်စေခြင်းဟာ၊ ဒုတိယအဆင့် 'Stage 2' ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအဆင့် 'Stage 3' ထည့်သွင်းထားတဲ့ servo valves တွေမှာတော့ additional spool ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ spool ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ ဒုတိယအဆင့် 'Stage 2' မှ hydraulic pressure ကို additional spool သို့ သက်ရောက်စေပါတယ်။ additional spool valve မှာ သက်ရောက်တဲ့ pressure အား actuator သို့မဟုတ် motor သို့ပေးသွင်းခြင့်ဖြင့်၊ servo system အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
servo-valve မှာ hydraulic pressure inlet နဲ့ torque motor အတွက်၊ electrical input ကိုပေးသွင်းပါတယ်။ စီးဝင်လာတဲ့ electrical input current ရဲ့ (+) positive သို့မဟုတ် (-) negative ပမာဏပေါါမူတည်ပြီး flapper ရွှေ့လျှားပါတယ်။ flapper ရွှေ့လျှားမှုမှတဆင့် servo-valve အတွင်းမှ၊ spool ရွှေ့လျားပြီး၊ hydraulic actuator ရဲ့chambers 'A' နဲ့ 'B' တို့အတွင်းမှ hydraulic pressure ကို၊ controlled အနေနဲ့ ထိမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ spool ရွှေ့လျားတဲ့အခါ၊ servo-valve ရဲ့ port တွေမှာ အဖွင့်အပိတ် ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ hydraulic pressure ကို actuator ရဲ့ တဖက်အခြမ်းအတွင်းသို့ စီးဆင်းစေပါတယ်။ actuator ရဲ့ အခြားတဖက် အခြမ်းအတွင်းမှ hydraulic fluid ကိုတော့၊ servo-valve အတွင်းသို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည်၊ စီးဝင်စေပါတယ်။
'Flapper nozzle servo-valve' - electromagnetic torque motor ဟာ flapper ကိုရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ motor မှာ၊ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ torque ဟာ၊ ပေးသွင်းတဲ့ applied current နဲ့ proportionally တိုက်ရိုက် အချိုးကျပြီး၊ သေးငယ်တဲ့၊ mili-ampere range ပမာဏ ဖြင့်သာ၊ ပေးသွင်းပါတယ်။ torque motor မှာ၊ magnetically permeable armature (၁) ခု ပါဝင်ပြီး၊ coil (၂) ခုကို armature winding အဖြစ် 'ပတ်' ထားပါတယ်။ armature ဟာ flapper piece ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သလို၊ permanent magnets (၂) ခုအကြားမှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ applied current ကို armature coil သို့ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ armature မှာ၊ magnetic flux တွေပေါါပေါက်လာပါတယ်။
permanent magnets တွေရဲ့ magnetic poles တွေကြားမှာ၊ ပေးသွင်းတဲ့ applied current ရဲ့ direction အရ၊ armature မှ magnetic poles တွေရှိနေပါတယ်။ permanent magnets တွေဟာ၊ armature မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ magnetic poles ရဲ့ direction ပေါါမူတည်ပြီး၊ direction မတူတဲ့အခါ attraction အနေနဲ့ ဆွဲယူမှာဖြစ်သလို၊ direction တူတဲ့အခါ repelling အနေနဲ့ တွန်းကန်ပါတယ်။
permanent magnets တွေရဲ့ attraction နဲ့ repelling ကြောင့်၊ armature ဟာ၊ torque တန်ဖိုးပမာဏတခုဖြင့် လည်ပတ်သွားပါတယ်။ armature လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ flapper လည်းလိုက်ပါရွှေ့လျှားပါတယ်။ permanent magnets တွေဟာ၊ လည်ပတ်သွားတဲ့ armature အား၊ position တခုမှာ lock အနေနဲ့ ပုံသေရှိနေစေပြီး၊ applied current ပမာဏထပ်မံတိုးမြှင့်မှသာ၊ နောက်ထပ် position တခုသို့ ဆက်လက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
flapper ဟာလည်း၊ armature မှာ သက်ရောက်တဲ့ magnetic flux တွေကြောင့်၊ lock အနေနဲ့ position တခုမှာ ပုံသေ ရှိနေတဲ့အပြင်၊ nozzles တွေမှာရှိနေတဲ့ hydraulic flow forces, flapper hinge point ရဲ့ friction force တို့ အပါအဝင်၊ flapper နဲ့ spool တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ feed back spring wire ရဲ့ forces တွေကြောင့်၊ torque balance အနေနဲ့ တည်ငြိမ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ flapper နဲ့ spool တို့ကို feed back spring wire ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်၊ servo-valve မှာ stability ပိုမိုရရှိနိုင်သလို၊ performance လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
applied current ရဲ့ direction ကိုပြောင်းလဲပြီး၊ ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ armature ဟာ မူလ permanent magnet မှ၊ အခြား permanent magnet တခုထံသို့ reverse direction ဖြင့်လည်ပတ်ကာ၊ ရွှေ့လျှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ armature ရဲ့ လည်ပတ်မှုကြောင့် flipper ဟာ nozzle တခုနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်သွားပြီး၊ အခြား nozzle တခုနဲ့ ပိုမိုဝေးကွာသွားပါတယ်။ nozzle တခုနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်သွားတဲ့အခါ၊ flipper နဲ့ nozzle အကြားမှ hydraulic fluid ရဲ့ flow area ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီး၊ အခြားတဖက်မှာတော့ flow area ကျယ်ပြန့်သွားပါတယ်။ armature ဟာ၊ (~ 0. 01 radius) ပမာဏခန့်သာရှိတဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ angle နဲ့သာ direction of rotation အဖြစ်၊ လည်ပတ်သလို၊ flipper နဲ့ nozzle တို့ကြားမှ gap အကွာအဝေး 'G' ဟာလည်း (0. 002 ~ 0. 003) inches ခန့်သာရှိပါတယ်။
'G' ဆိုတဲ့ flipper နဲ့ nozzle တို့ကြားမှ gap အကွာအဝေးကြီးမားခဲ့လျှင်၊ armature ဟာ direction of rotation အနေနဲ့၊ ဆက်လက် မလည်ပတ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်၊ flipper မှာရှိနေတဲ့ torque balance forces တွေကြောင့် latch အနေနဲ့ ကန့်လန့် အတားအဆီးတခုလို၊ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ 'Flapper nozzle servo-actuator' မှ၊ nozzle ရဲ့ အဝင် inlet ဟာ orifices inlet (၂) ခု ဖြစ်ပြီး၊ 'Q1' နဲ့ 'Q2' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ nozzle ရဲ့ အထွက် outlet (၂) ခုကို 'Pn1' နဲ့ 'Pn2' အဖြစ် သတ်မှတ်သလို၊ flapper နဲ့ spool တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ feed back spring wire ကိုတော့၊ nozzle ရဲ့ back pressure 'Pn3' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ nozzle inlet orifice 'Q1' နဲ့ 'Q2' တို့ဟာ၊ flapper ရဲ့ ရွှေ့လျှားမှုပေါါမူတည်ပြီး hydraulic pressure နဲ့ volume အပြောင်းအလဲကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
flapper နဲ့ nozzle တို့ဟာ linear relation ဖြင့်ဆက်စပ်နေပြီး၊ flapper နဲ့ nozzle တို့ အကြားမှာပေါါပေါက်လာမယ့် circumferential area ဟာ၊ nozzle diameter ထက်သေးငယ်ပါတယ်။ nozzle တို့ကြားမှ circumferential area ဟာ၊ flow control area ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် flapper ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ ရွှေ့လျှားမှု movement မှတဆင့်၊ accurate control ကို ရရှိစေတဲ့အတွက်၊ torque motor ရဲ့ materials, windings နဲ့ overall design features တွေဟာလည်း၊ အရေးကြီးပါတယ်။ flapper ရဲ့ movement ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ accurate control ဟာ pilot spool သို့ သက်ရောက်ပြီး၊ pilot spool မှတဆင့်၊ actuator ကို၊ actual control အနေနဲ့ ရွှေ့လျှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
pilot spool ရဲ့ ဟိုဖက်၊ ဒီဖက် both sides (၂) ဖက် စလုံးမှာ၊ flapper နဲ့ nozzles တို့ရဲ့ control pressure acting သက်ရောက်ပါတယ်။ flapper ဟာ အလယ်ဗဟို neutral position မှာရှိနေစဉ်၊ ဟိုဖက်၊ ဒီဖက် nozzle flow areas တွေဟာ ညီမျှနေမှာဖြစ်သလို၊ nozzle ရဲ့ အထွက် outlet pressures 'Pn1' နဲ့ 'Pn2' တို့ဟာလည်း၊ ညီမျှနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ nozzle ရဲ့ အဝင် inlet မှ flow areas တွေ ညီမျှနေခြင်းနဲ့ inlet nozzle pressures တွေ ညီမျှနေခြင်းကလည်း၊ neutral position မှာရှိနေတဲ့ flapper ကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။
flipper ဟာ၊ nozzle 'n1' နဲ့ ပိုမိုနီးကပ်သွားတဲ့အခါ၊ nozzle ရဲ့ အထွက် outlet flow area လည်း၊ ကျဆင်းသွားပြီး၊ outlet pressures 'Pn1' မြင့်တက်လာပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ nozzle 'n2' ရဲ့ outlet flow area မြင့်တက်သွားပြီး၊ outlet pressures 'Pn2' ကျဆင်းသွားပါတယ်။ မတူညီတဲ့ outlet pressures 'Pn1' နဲ့ 'Pn2' တို့ကြောင့် differential pressure '∆p' ပေါါပေါက်လာပြီး၊ "(differential pressure ∆p= Pn1 – Pn2 )" အရ spool ဟာ၊ outlet pressures နည်းတဲ့ nozzle 'n2' ဖက် အခြမ်းသို့၊ ရွှေ့သွားပါတယ်။ high pressure fluid ဟာ၊ actuator chamber 'PA' အတွင်းသို့ စီးဝင်လာပြီး၊ actuator chamber 'PB' အတွင်းမှ fluid ကတော့ return အနေနဲ့ servo-valve အတွင်းသို့ ပြန်လည် စီးဆင်းသွားပါတယ်။ flapper ဟာ nozzle 'n1' ဖက်သို့ရွှေ့သွားစဉ်၊ feed back spring wire မှ၊ neutral position သို့ ပြန်လည်ဆွဲယူပါတယ်။
flapper system မှာ stabilizing force ရရှိစေရန်၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ spring wire အစား linear variable differential transducer တွေကိုလည်း feed back အဖြစ်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ 'Hall effect sensor' သို့မဟုတ် 'Piezoelectric sensor' နဲ့ 'Fiber-optic force sensor' အစရှိတဲ့ linear variable differential transducer တွေရဲ့ output signal ဟာ၊ armature သို့ ပေးသွင်းနေတဲ့ applied current ကို၊ control လုပ်ပြီး stabilizing ရရှိစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
'Jet pipe servo-valve' - servo systems တွေကို ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ load positioning servo system, velocity servo system နဲ့ force servo system ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ applications တွေအပေါါမူတည်ပြီး၊ servo systems တွေ ကွဲပြားပေမယ့်၊ flapper nozzle type နဲ့ jet pipe type servo-valve (၂) မျိုးထဲမှ၊ တမျိုးကို အဓိက main component အဖြစ် တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ jet pipe type servo-valve မှာ spool ရွှေ့လျှားမှုဖြစ်ပေါါစေရန်၊ jet pipe အား၊ အသုံးပြုထားပြီး၊ torque motor အလုပ်လုပ်ပုံကတော့၊ flapper nozzle type servo-valve အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
jet pipe ဟာ hydraulic fluid moving ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ kinetic energy ကို၊ static pressure အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ servo-valve ရဲ့ receiver block မှာ အပေါက် hole (၂) ခု ပါဝင်ပြီး၊ hole (၂) ခုရဲ့ အလယ်ဗဟို center မှာ jet pipe ရှိနေတဲ့အခါ၊ servo ဆိုတဲ့ spool ရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် both end မှာ သက်ရောက်နေမယ့် hydraulic pressure တွေဟာလည်း၊ ညီမျှနေပါတယ်။ receiver hole တခုဖက်ဆီသို့၊ jet pipe လည်ပတ်ကာရွှေ့လျှားသွားတဲ့အခါ၊ receiver hole ရဲ့ hydraulic pressure ဟာ၊ jet pipe နဲ့ ဝေးသွားတဲ့ receiver hole ရဲ့ hydraulic pressure ထက် ပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် servo ဆိုတဲ့ spool မှာ pressure unbalanced condition တခုပေါါပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
'Bernoulli’s equation' ကို၊ သုံးပြီး၊ jet pipe ရဲ့ rotational movement ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာမယ့် stagnation pressure 'PS' ကို၊ တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။ stagnation pressure 'PS' ဟာ၊ hydraulic fluid ရဲ့ အလယ် midstream မှာ ဖြစ်ပေါါမယ့် maximum fluid pressure ဖြစ်ပါတယ်။
jet stream ဟာ၊ receiver block ရဲ့ အလယ်ဗဟိုကို၊ သက်ရောက်နေစဉ်၊ spool ရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် both end မှာ သက်ရောက်နေမယ့် hydraulic pressure တွေ၊ ညီမျှနေတဲ့အတွက်၊ (∆p = 0) အနေနဲ့၊ differential pressure ဖြစ်ပေါါခြင်း မရှိနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
jet pipe ဟာ၊ receiver block ရဲ့ ညာဖက် 'right side' သို့ရွှေ့လျှားသွားတဲ့အခါ၊ jet stream ကြောင့် ညာဖက် receiver hole မှာ hydraulic fluid pressure မြင့်တက်လာပြီး၊ ဘယ်ဖက် left side မှာရှိနေတဲ့ receiver hole မှာတော့ pressure ကျဆင်းသွားပါတယ်။ differential pressure '∆p' ပေါါပေါက်လာခြင်းဖြစ်သလို၊ jet pipe ရဲ့ ရွှေ့လျှားမှု အကွာအဝေးဟာ၊ သေးငယ်လွန်းပေမယ့် differential pressure ဟာ jet pipe travel range နဲ့ linear relation ဖြင့်၊ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါတယ်။
jet pipe ရဲ့ nozzle diameter နဲ့ receiver hole diameters တွေဟာ၊ relationship အနေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိသလို၊ jet pipe nozzle ရဲ့ performance လို့ခေါါတဲ့ optimization ဟာလည်း၊ servo-valve အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ 'maximum L =2Dn' ဆိုတဲ့ nozzle နဲ့ receiver hole အကွာအဝေး ဆက်သွယ်ချက်အရ၊ အများဆုံးအကွာအဝေး maximum 'L' ဟာ၊ receiver hole diameter ထက်၊ (၂) ဆခန့်သာ ရှိသင့်ပါတယ်။ nozzle နဲ့ receiver hole တို့ဟာ၊ တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ်ဆုံး၊ အကွာအဝေးမှာ ရှိတဲ့အခါ၊ optimization ပိုမိုကောင်းမွန်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
optimization ကောင်းမွန်မှသာ၊ actuator chamber 'A' နဲ့ 'B' တို့အပေါါ တလှည့်စီသက်ရောက်မယ့် hydraulic pressure 'P1' နဲ့ 'P2' တို့ကိုလည်း၊ maximum pressure အနေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Jet pipe servo-valve ရဲ့ spool မှာ differential pressure '∆p' သက်ရောက်နေစဉ်၊ stabilizing force ရရှိဖို့၊ 'Flapper nozzle servo-valve' တွေကဲ့သို့၊ feed back spring wire သို့မဟုတ် linear variable differential transducer တွေကိုတတ်ဆင် အသုံးပြုပါတယ်။
jet pipe servo-valve ရဲ့ receiver block hole diameter ဟာ၊ ကြီးမားပါတယ်။ hole diameter ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ hydraulic fluid မှာ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ အမှုန်၊ အနည်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေကြောင့် contamination ရှိနေပေမယ့်၊ jet pipe servo-valve ရဲ့ servo operation ကို၊ ထိခိုက်နိုင်ခြင်း မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ jet pipe orifices ဆိုတဲ့ jet pipe nozzles တွေရဲ့ diameter ဟာ၊ flapper nozzle diameter ထက်၊ ပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
jet pipe nozzle diameter ကြီးမားတဲ့အတွက် jet pipe servo-valve မှာ leakage flow ဆိုတဲ့၊ internal leakage ဖြစ်ပေါါတတ် သလို၊ flapper nozzle servo-valve မှာတော့ flapper nozzle diameter သေးငယ်တဲ့အတွက်၊ hydraulic fluid contamination ကြောင့်၊ ပိတ်ဆို့တတ်ပါတယ်။ flapper nozzle ပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါ၊ spool ဟာ direction တဖက်တည်းကိုသာရွှေ့လျှားပြီး၊ အခြားတဖက်သို့ မရွှေ့နိုင်ပဲ၊ ရပ်နေတတ်ပါတယ်။
'Servo movement' - spool အား၊ hydraulic fluid pressure ပေးသွင်းပြီး၊ ဟိုဖက်ဒီဖက် လိုအပ်သလိုရွှေ့လျှားစေခြင်းကို 'servo movement' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ servo movement ရရှိစေရန် အသုံးပြုတဲ့ spool ဟာ rod တခုနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ lands (၂) ခုပါဝင်တဲ့ spool ဖြစ်ပြီး၊ bushing လို့ခေါါတဲ့ outer sleeve အတွင်းမှာရွှေ့လျှားပါတယ်။ hydraulic fluid စီးဝင်နိုင်စေရန် sleeve မှာ flow port တွေဖောက်ထားပြီး၊ spool နဲ့ outer sleeve တို့ကို၊ ပေါင်းစပ်ကာ 'servo' လို့ခေါါပါတယ်။
'servo' ဟာ၊ hydraulic paths ရဲ့ actuation component တခုဖြစ်ပါတယ်။ spool ရဲ့ position ရွှေ့လျှားမှုဟာ၊ valve အတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားမယ့် hydraulic fluid ရဲ့ flow area ပေါါမူတည်ပါတယ်။ flow area ကို control လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ spool ရဲ့ position ရွှေ့လျှားပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ open/ closed ဆိုတဲ့ 'two position solenoid controlled', applied current အား၊ လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲပေးသွင်းတဲ့ 'proportional solenoid controlled' နဲ့ 'mechanical lever controlled' အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး၊ flow area ကို control လုပ်ကြပါတယ်။
'Servo flow characteristic equation' လို့ခေါါတဲ့ 'Turbulent orifice flow equation' အရ၊ valve spool position 'Xv' ဟာ၊ flow cross-sectional area 'Av' နဲ့ ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ flow cross sectional area ကြောင့် valve spool ရဲ့ position ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ servo ရဲ့ flow rate ကိုတော့၊ outlet flow area မှ controlled လုပ်ပြီး၊ outlet flow area ဟာ၊ inlet flow area ထက်သေးငယ်ပါတယ်။
bushing လို့ခေါါတဲ့ outer sleeve အတွင်းမှာ spool တည်ရှိနေပုံ အနေအထားကို 'lapped' လို့ခေါါပါတယ်။ spool တည်ရှိနေပုံ အနေအထားအပေါါမူတည်ပြီး၊ servo တွေကို zero lapped servo, over lapped servo နဲ့ under lapped servo အဖြစ်ခွဲခြား၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။ 'zero lapped servo' ရဲ့ land width အကျယ်နဲ့ flow port တွေရဲ့ width ဟာတူညီပါတယ်။ land width နဲ့ port width တူညီနေတဲ့အတွက်၊ outlet မှာ zero flow position ဖြစ်ပေါါနေပြီး၊ tightest control အနေနဲ့ တိကျမှုရှိတဲ့ high precision servo-valves တွေအဖြစ်၊ အသုံးပြုပါတယ်။ 'over lapped servo' မှာတော့ land width ဟာ flow port width ထက်ပိုကြီးပါတယ်။ spool ရွှေ့လျှားတဲ့အခါ ပေါါပေါက်လာမယ့် flow area vs pressure curve ဆိုတဲ့ flow area နဲ့ pressure ဆက်သွယ်ချက်မှာ၊ dead-band အနေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။
minimum spool movement ဟာ overlap dimension နဲ့ညီမျှပြီး၊ spool ရွှေ့လျှားပြီးမှသာ outlet flow စီးဆင်းပါတယ်။ overlapped servo တွေရဲ့ 'noise' factors tolerant ဟာကြီးမားပါတယ်။ 'noise' factors tolerant ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ တိကျတဲ့ control accuracy ရရှိနိုင်မှု ကျဆင်းသွားပါတယ်။ under lapped servo ရဲ့ land width ဟာ၊ port width ထက်ငယ်တဲ့အတွက်၊ spool position အကုန်လုံးမှာ၊ outlet flow စီးဆင်းနေပါတယ်။ outlet flow ကြိုတင်ရှိနေတဲ့အတွက်၊ control response ပိုမြန်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
'Turbulent orifice flow equation' အရ၊ servo port ရဲ့ flow area ကို၊ 'A (Xv)' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ flow area ဟာ valve တည်ဆောက်ပုံ type ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ spool position တို့ အပေါါမူတည်ပါတယ်။ differential pressure '∆p' ဟာ၊ constant အနေနဲ့ တည်ငြိမ်နေတဲ့အခါ၊ flow rate နဲ့ flow area တို့ဟာ၊ proportionally varies အနေနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပြောင်းလဲနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ flow area ဟာ constant အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့အခါမှာတော့၊ flow rate နဲ့ differential pressure '∆p' တို့ဟာ၊ square root varies ဆိုတဲ့ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း ဆက်သွယ်ချက်နဲ့ လိုက်ပါပြောင်းလဲနေပါတယ်။
အပေါါမှာဖော်ပြထားတဲ့ 'flow curve' မှာ၊ differential pressure '∆p' ဟာ၊ constant အနေနဲ့ တည်ငြိမ်နေပြီး၊ servo မှ sleeve port အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမယ့် hydraulic fluid ရဲ့ controlled flow နဲ့ valve position တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ zero lapped spool မှာ curve ဟာ controlled flow နဲ့ valve position တို့ရဲ့ origin point အားတဖြောင့်တည်း ဖြတ်သန်းသွားတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ overlapped servo မှာ၊ flow ဟာ zero အနေနဲ့ ရှိနေပြီး၊ sufficiently moved အနေနဲ့ spool ရွှေ့လျှားသွားမှ flow စတင် စီးဆင်းပါတယ်။
under lapped valve မှာတော့ flow ဟာ servo ရဲ့ directions (၂) ဖက်စလုံးသို့စီးနေပြီး၊ spool စတင်ရွှေ့လျှားတဲ့အခါ၊ zero flow အနေနဲ့ ရပ်တန့် သွားပါတယ်။ spool စတင်ရွှေ့လျှားခြင်းကို load စတင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ zero flow အနေနဲ့ servo မှ hydraulic fluid စီးဆင်းခြင်း မရှိတဲ့အခြေအနေကို၊ 'null' position လို့ခေါါပါတယ်။ spool ဟာ null position ကိုကျော်လွန်သွားတာနဲ့ လျှင်မြန်စွာရွှေ့လျှားသွားပြီး၊ sleeve ရဲ့ outlet port အား အလျှင်အမြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
Fig. (A) Flow rate behavior foratwo position servo and (B) Mechanically positioned servo
open/ closed ဆိုတဲ့ 'two position solenoid controlled' servo တွေမှာ၊ spool မရွှေ့လျှားခင် minimum flow area 'Amin' အတွင်း၊ zero flow အနေနဲ့ servo မှ hydraulic fluid စီးဆင်းခြင်း မရှိသလို၊ spool ရွှေ့လျှားတဲ့အခါ maximum flow area 'Amax' အား၊ 100 mili-seconds အောက်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ၊ ချက်ခြင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ 'mechanical lever controlled' ဆိုတဲ့ mechanically positioned servo တွေမှာတော့၊ flow area ဟာ၊ mechanically input force 'F' နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် mechanically input force အပေါါမှာ တိုက်ရိုက်မှီခိုပြီး၊ flow area ပြောင်းလဲတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
servo တွေကိုရွေးချယ်တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ အသုံးပြုမယ့် pressure rating, ပေါါပေါက်လာမယ့် differential pressure နဲ့ temperature rating, တတ်ဆင်ထားတဲ့ spring, အသုံးပြုမယ့် actuation method နဲ့ speed, closed loop system မှ interactions ဆိုတဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုမယ့် equipment နဲ့ devices တွေရဲ့ သက်ရောက်မှု effect, servo-valve materials, friction, seals/ clearances, failure modes နဲ့ chattering အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Electro-hydraulic servo-valve
အသုံးပြုမယ့် pressure rating နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ servo ဖြစ်ဖို့လိုသလို၊ servo အထွက်မှ၊ downstream pressure ဟာ၊ servo အတွင်းမှ orifice လို့ခေါါတဲ့ nozzle အား၊ flow restriction အနေနဲ့ အနှောက်အယှက်ပေးကာ၊ ပြန်လည် သက်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်၊ differential pressure ဟာ downstream pressure ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
servo ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာရဲ့ environmental temperatures ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ non-powered position မှာ servo ကို return အဖြစ် ပြန်လာစေရန်၊ တခါတရံ spring ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ spring ရဲ့ force ဟာ၊ non-powered condition အခြေအနေအပြင်၊ operating conditions အခြေအနေအားလုံး အတွက်မှာပါ၊ လုံလောက်မှုရှိ မရှိကို၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုသလို၊ solenoid သို့မဟုတ် mechanical linkage ဟာ၊ spring ရဲ့ overcome force ကို၊ ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
servo position ကို၊ control အနေနဲ့ ထိမ်းကျောင်းတဲ့အခါ၊ solenoid သို့မဟုတ် mechanical linkage တို့ကိုအသုံးပြုပြီး၊ actuation method လို့ခေါါပါတယ်။ actuation method ကိုရွေးချယ်ရာမှာ၊ hydraulic system တခုလုံးရဲ့ overall system layout နဲ့ design အားအခြေခံပြီး၊ solenoid အတွက် ရရှိနိုင်မယ့် maximum နဲ့ minimum available voltages တွေကို၊ ရွေးချယ်ပါတယ်။ mechanical linkage method ကိုရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာတော့၊ hydraulic system တခုလုံးမှာပေါါပေါက်နိုင်မယ့် inertia, friction နဲ့ maximum applied load တို့အား၊ အခြေခံပြီး ရွေးချယ်ပါတယ်။ hydraulic system ရဲ့ structure နဲ့ components တွေအလိုက်၊ actuation method ဟာ၊ ကိုက်ညီမှု compliance ရှိမရှိကို၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် hydraulic system ဟာ၊ reset force ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ၊ spring reset mechanism တတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
servo ဟာ actuation device ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ speed ကိုလည်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ solenoid ကိုအသုံးပြုထားတဲ့၊2position (open/ closed) servo တွေဟာ၊ လျှင်မြန်တဲ့ fast response servo တွေ ဖြစ်ပြီး၊ closed အနေနဲ့ ပြန်ပိတ်တဲ့အခါ၊ pressure waves တွေပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ pressure waves ဟာ၊ control system မှာ၊ shut off flow အဖြစ်၊ အနှောက်အယှက်ပေးတတ်တဲ့အတွက်၊ fault အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ pressure waves တွေငြိမ်သက်သွားစေရန်၊ time required အနေနဲ့ 50 ~ 100 milliseconds ခန့် အချိန်ယူပြီးမှ၊ actuation ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်၊ shut off flow အားလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
servo အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ material ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ၊ corrosion နဲ့ environmental considerations ပိုင်းတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်သလို၊ မြင့်မားတဲ့ extreme temperature ကိုလည်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ mechanically actuated servos တွေဟာမှ၊ mechanical linkage method ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်၊ spool မှာ friction ပေါါပေါက်နိုင်ပါတယ်။
servo တော်တော်များများရဲ့ spool နဲ့ housing တို့ကို၊ tight clearances အနေနဲ့တတ်ဆင်ထားပြီး၊ leakage မဖြစ်ပေါါစေရန် တားဆီးကြပါတယ်။ တခါတရံလည်း leakage ကို တားဆီးဖို့ seal တွေကို၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ tight clearances နဲ့ seal တို့မှာ၊ tear and wear ဆိုတဲ့ ပွန်းစားခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ tear and wear down ဟာ၊ အသုံးပြုရာပတ်ဝန်းကျင် environmental conditions တွေကြောင့် ပေါါပေါက်တတ်သလို၊ aging ဆိုတဲ့အသုံးပြုမှု သက်တမ်းကြာလာတဲ့ အခါမှာလည်း ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ wear and tear ကြောင့်၊ leakage flow ဆိုတဲ့၊ internal leakage ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
servo ဟာ၊ full closed position မှ full open position သို့ရွှေ့လျှားနေစဉ်၊ လမ်းခုလတ်မှာ 'jamming' အနေနဲ့ ဆက်မရွှေ့နိုင်ပဲ ရပ်သွားတတ်ပါတယ်။ solenoid ဟာ၊ servo ကိုလုံလောက်တဲ့ current မပေးသွင်းနိုင်တဲ့ အခါမျိုးတွေနဲ့၊ hydraulic fluid contamination ကြောင့်၊ spool မှာ high friction ရှိနေတဲ့အခါ၊ jamming ဖြစ်ပေါါတတ်ပြီး၊ failure mode လို့ခေါါပါတယ်။ hydraulic fluid အဝင်အထွက်၊ upstream နဲ့ downstream pressure ကြောင့်၊ proportional servo တွေမှာ၊ 'chattering' ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ chattering ဟာ natural frequency တခုနဲ့ အသံမြည်တတ်သလို၊ fluid flow ကိုလည်း damping အနေနဲ့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေတတ် ပါတယ်။
hydraulic fluid flow နဲ့ differential pressure '∆p' တို့ဟာ၊ 'Turbulent orifice flow equation' အရ ဆက်သွယ်နေခြင်းဖြစ်သလို၊ spool မှာပေါါပေါက်လာတဲ့၊ force balance ကြောင့် servo position ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ force balance မှာ flapper nozzle ဒါမှမဟုတ် jet pipe မှတဆင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ differential pressure သာမက၊ spool မှာသက်ရောက်နေတဲ့ friction forces, spring forces နဲ့ flow forces တွေလည်း ပါဝင်တဲအ့ကြောင်း၊ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
spool ဟာ neutral position မှာရှိနေခြင်းကို 'null position' မှာ servo-valve ရှိနေခြင်းအဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။ null position ဟာ hydraulic fluid စီးဆင်းခြင်းမရှိတဲ့၊ non-flow position ဖြစ်ပါတယ်။ servo-valve အများစုကိုကြည့်လျှင်၊ compression springs တွေကို servo ရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် both side မှာ၊ တတ်ဆင်ပြီး၊ 'null position' အဖြစ်၊ ထိမ်းသိမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အချို့ servo-valve တွေမှာတော့ servo ရဲ့ တဖက်တည်းမှာ compression spring တတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ applied current ကြောင့် spool ရွှေ့လျှားတဲ့အခါ၊ spring ရဲ့ force ထက်မြင့်မားတဲ့ over come force ရရှိမှသာ၊ null position မှကျော်လွန်ပြီး၊ ရွှေ့လျှားနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် applied current ရုတ်တရက်၊ ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ၊ compression springs တွေကြောင့် servo ဟာ၊ null position သို့ ချက်ခြင်းပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီး၊ hydraulic fluid စီးဆင်းမှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
null position ဆိုတဲ့ non-flow position ကို 'null bias' လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ servo ကိုnull position မှရွေ့သွားစေမယ့် applied current ကိုတော့ 'null bias current' လို့ခေါါပါတယ်။ null bias current ဟာ servo မှာ ဖြစ်ပေါါသက်ရောက်တတ်တဲ့ supply pressure, operating temperatures နဲ့ wear and tear တွေကြောင့်၊ အနည်းအများအပြောင်းအလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ null bias current ကို rated current ရဲ့ ± 3% ခန့်အတွင်းထားရှိပါတယ်။
'Servo-valve flow characteristics' - servo ရွှေ့လျှားမှုကြောင့်၊ hydraulic fluid ရဲ့ flow မှာ characteristics တွေ၊ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါါပါတယ်။ orifice flow equation ကို flow characteristics အနေနဲ့၊ ဖော်ပြနိုင်သလို၊ control flow နဲ့ load pressure တုိ့၊ ဆက်သွယ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Flow characteristics – Control flow vs. Load pressure
'i/ imax' ဟာ၊ servo-valve သို့ပေးသွင်းမယ့် applied current နဲ့ maximum current တို့ရဲ့ ratio ဖြစ်ပါတယ်။ 'ρ' ဟာ hydraulic fluid ရဲ့ density ဖြစ်ပြီး၊ 'q' က flow rate ဖြစ်ပါတယ်။ '∆p' ဟာ differential pressure ဖြစ်ပြီး၊ servo-valve ဟာ null position တဝိုက်နဲ့၊ spool travel ရဲ့အဆုံးမှာ၊ မြင့်မားတဲ့ higher gain ရရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Servo flow characteristics – Control flow vs. Input current
input current အပေါါမူတည်ပြီး၊ control flow ပြောင်းလဲပါတယ်။ အကယ်၍ differential pressure '∆p' ဟာ၊ အပြောင်းအလဲမရှိ constant အနေနဲ့၊ တည်ငြီမ်နေတဲ့အခါ၊ control flow ဟာ liner အနေနဲ့ လိုက်ပါပြောင်းလဲပါတယ်။ higher differential pressure '∆p' ကြောင့် flow မြင့်တက်လာပါတယ်။
Fig. Servo flow characteristics – Flow curve with hysteresis
current ကို0ampere မှ maximum positive ampere value၊ တခါ maximum negative ampere value မှ0ampere၊ အစရှိသလို ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ control flow ကို အပြာရောင်ဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ curve အနေနဲ့တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ servo-valve မှာ၊ torque motor ရဲ့ electromagnetic effects တွေနဲ့ friction တို့ကြောင့်၊ hysteresis တွေပေါါပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ ideal flow curve မှာ hysteresis effects ကို ဥပမာအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
electromagnetic effects ဟာ၊ non-linear characteristic ရှိတဲ့အတွက်၊ hysteresis loop ဟာ၊ input signal ပေါါမူတည်ပြီး၊ non-linear width အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါါလာတာကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ friction ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ hysteresis ကတော့၊ non-linearity characteristics နဲ့ပေါါပေါက်ပေမယ့်၊ backlash ဆိုတဲ့ hysteresis loop ရဲ့ clearance သေးငယ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် spool ရဲ့ movement function တလျှောက်လုံးမှာ၊ constant အနေနဲ့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ servo-valve ရဲ့ hysteresis ကို၊ valve dynamic position မှာရှိနေတဲ့၊ inertia effect ကို၊ ထည့်မတွက်ပဲ၊ spool ရွှေ့လျှားစဉ် slow speed မှာ၊ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Servo flow characteristics – Flow curve with Hysteresis & Null Bias
null bias ကြောင့်၊ servo မှာ unbalanced spring effect ပေါါပေါက်နိုင်ပါတယ်။ servo ဟာ unbalanced spring effect ကြောင့် အလယ်ဗဟိုမှာမရှိပဲ၊ 'offset' အနေနဲ့ direction တဖက်သို့ ရောက်နေတတ်သလို၊ torque motor current ကို ပိုမိုပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ shifting flow ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ electronic controllers တွေ၊ closed loop position control loops တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့၊ servo-actuators တွေဟာ၊ inherently ဆိုတဲ့ပင်ကိုယ်မူလတည်ဆောက်ပုံအရ၊ non-linear behavior ဘဘာဝ ရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 16:55
htut nwe 29 September 2013 at 05:10